Ukutshala kwesihlahla se-okhi acorns: engadini engadini uzungu
Wena wathwalwa yizingelosi umklamo landscape ezweni lakhe futhi kubekwe sikhule kwesihlahla se-okhi kusayithi? Kunganjani! Awukwazi qinisekisa ukuthi nje nezihlahla AmaConifers. Ukutshala kwesihlahla se-okhi acorns ngeke kuthathe isikhathi sakho esiningi, futhi akukho eziyinkimbinkimbi, nje kudingeka bazi ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama.
utshale isihlahla enhle ukwenza kube uyabukeka emehlweni kanjani?
Uma kuziwa kwesihlahla se-okhi, kwesokudla phambi kwamehlo ami kukhona umfanekiso giant Kweminyaka. Kufanele kuqashelwe ukuthi isihlahla osemusha emhlabathini omuhle kusheshe sithole ukukhula okuqinile. Ukuthi akukhona kakhulu basondela, kufanele equkethwe. Lokhu kuzoxoxwa ngakho kamuva.
Ake uqale nge yokuthi okutshalwe oki acorns - nendlela efakazisiwe futhi eqotho. Ngu uqobo, i isithelo - kuyinto imbewu esikhulu germinates ukubonga. Uma ukutshalwa kwezihlahla ezintsha ukuze sidonse ingane, kuyobe sekuba i-inqubo ulwazi futhi othakazelisayo. Futhi endabeni umzamo yimpumelelo eminyakeni ukuba indaba ukutshela abazukulu.
Kukhona enye indlela esingathola - kokufika kwesihlahla se-okhi ngokudlulisela ke kusukela indawo ayijwayele. Ngamanye amazwi, hamba umbe esihlahleni ehlathini. Kodwa kulokhu, ukuqinisekisa ukuthi ngeke sizijwayeze, kakhulu, amancane kakhulu. Kungani? Ngenxa ezavela isithelo ihlumela lokuqala, ake a eside kakhulu emuva, singasho, ikhula emhlabathini. Bambe ke ziphuma enhlabathini ngaphandle kokulimaza cishe kungenakwenzeka. Futhi nge "kwalimala" impande lomuthi ngeke basinde. Ngakho-ke, ukutshala i-oak acorns uzokunika usethubeni elihle impumelelo.
Tshala imbewu ngezindlela eziningana. Ngokwesibonelo, prosaic kakhulu: kwekwindla isithelo sesivuthiwe ukubeka endaweni lapho umuthi wakho luyokhula. Bury ngokujulile akudingekile, nje bayeke yindawo encane ukuze izinyoni ingamangalelwanga. Entwasahlobo ukuze iqhwa elisenyameni umuthi wakho iqala ukuhluma. 100% isiqinisekiso, Lutho neze, i isithelo futhi kungaba ukubola futhi udliwe abanye isilwane. Inqubo efanayo kungaba waphinda ngasekuqaleni kwentwasahlobo.
Gwema ukwehluleka can ukutshala isithelo ekhaya esitsheni okusezingeni eliphezulu. Ngaphambi ukuthi kungenziwa wageza nge imbewu insipho, ukubhubhisa wonke izimuncagazi, okuyinto akubone ungakwazi ngamehlo ethu. Ukutshala kungcono kakhulu ngasekupheleni ebusika. Ngemva kwamasonto 2-3 uzobona rostochku eqinile. Bamane naso isikhathi ukuqoqa amandla okushintsha ezweni "omkhulu". Sebenzisa umhlabathi efanayo isitsha sezimbali lasekhaya.
Tshala i isithelo kanye autumn, kodwa kuyinto enzima. Nonke ubusika eside futhi kwentwasahlobo uzodinga basinakekele. Ngezinye izikhathi ihlumela abasha ekupheleni kwesikhathi abandayo phinda amahlamvu kuka kuyakhungathekisa yabo.
Ukutshala kwesihlahla se-okhi acorns kudinga yesondlo little kakhulu. Kusukela udinga kuphela ukuthambisa avamile.
Kulapho avele amaqabunga ke kudingeka wenze nokuvimbela isikhutha. Lokhu ukhunta kakhulu othanda amahlumela amasha. Ukungabi izitshalo amahlamvu ziyingozi unformed.
izihlahla Young kungcono hhayi ukusika, uma akukho umgomo ebenza kwesihlahla se-okhi otshanini noma ukwenza art topiary - yakha ukuma amaqabunga. Lindela abasha-oak isihlahla ikhula ilingane oyifunayo.
Ukunqanda ukukhula kudingeka ukususa amanye amagatsha esiqwini futhi ingxenye ukwanda. Khona-ke lowo muthi uyobuye ube umqhele ngokwemvelo amahle. Uma ungazange ube ezilahliwe macala angaphambili, ukube bekunjalo kungcono ukuheha lokhu umakhelwane wensimu isakramente.
Njengoba ubona, ukutshala i-oak acorns - lula. Into eyinhloko ukukwenza ngothando futhi wangibekezelela. Young amahlamvu oluhlaza emithonjaneni yonke ngeke ngiyabonga futhi sijabulise iso lakho.
Kanjani futhi nini ukutshala eseshumi?
Ibanga Viking (amagilebhisi): incazelo, ukutshalwa, ukubuyekezwa
Houseplants Undemanding: ukukhethwa nokunakekela
"California Wonder" (pepper) ukubuyekezwa. Incazelo ezihlukahlukene, ezikhulayo izimo
Cherry Ovstuzhenka: incazelo grade nezithombe
Kanjani ukubungaza izivakashi at ephathini yelusuku lwekutalwa?
Laser amazinyo wokuhlanza kusukela itshe: Izimo ekusetshenzwa
HCT e segazi: uthola izingane, amadoda, abesifazane. Lisho ukuthini-HCT ekuhlolweni igazi?
Gunny - indwangu yokuthunga ifenisha Upholstery, hhayi kuphela
Intelligent zolwazi, izinhlobo zazo kanye nemisebenzi
Augustine - amagilebhisi izinhlobo
Baking soda isisindo ukulahleka. Usifaka kanjani isicelo?
Ukuwohloka - kuyini?